induction thermal fluid pombi hita-induction fluid pombi yekudziya system
musha / Applications / Induction Heating / induction thermal fluid pombi hita
Categories: Induction Heating, Pipe uye Tube Tags: fluid pipeline hita, fluid pipeline kudziyisa system, fluid tube hita, IH fluid pipeline, IH fluid pipeline hita, induction fluid hita, induction fluid pombi hita, induction fluid tube heater, induction fluid tuber heat system, induction heat fluid pipe, induction heat fluid pipeline, induction heat fluid system, induction heat pipeline, thermal fluid mafuta induction heater
Nzira dzakajairwa dzekudziya, semaboiler uye muchina wekupisa unopisa marasha, mafuta kana zvimwe zvinhu, kazhinji zvinouya nezvipingamupinyi zvakaita sekudziya kwakaderera, kudhura kwakanyanya, maitiro akaomarara ekugadzirisa, kusvibiswa, uye nharaunda ine njodzi yebasa. Induction heat yakanyatsogadzirisa matambudziko iwayo. Iine zvinotevera zvakanakira:
-Kunyanya kupisa kupisa; Chengetedza simba rakawanda;
-Fast tembiricha ramp-up;
-Digital software control inopa kutonga kwakaringana pamusoro pekushisa uye iyo yese yekudziya maitiro;
-Kuisa nyore uye kugadzirisa;
-Kuderera kwekushanda nekugadzirisa mari.
HLQ Induction Heating Equipment yakagadzirirwa Pipeline, Vessel, Heat Exchanger, Chemical Reactor uye Boiler. Zvikepe zvinoendesa kupisa kune izvo zvinoyerera zvakaita seIndasitiri Mvura, Mafuta, Gasi, Chikafu Material uye Chemical Raw Materials kudziyisa. Kupisa Simba saizi 2.5KW-100KW ndiwo mweya wakatonhodzwa. Saizi yesimba 120KW-600KW ndiyo mvura yakatonhodzwa. Kune vamwe pane saiti yemakemikari zvinhu reactor kupisa, Isu tinopa iyo yekudziya sisitimu neExplosion Proof Configuration uye Remote Control System.
Iyi HLQ yekudziya system ine induction heater, induction coil, tembiricha yekudzora system, thermal couple uye insulation zvinhu. Kambani yedu inopa yekumisikidza uye yekumisikidza chirongwa. Mushandisi anogona kuisa uye kugadzirisa wega. Isu tinogona zvakare kupa pane-saiti yekumisikidza uye kutumira. Kiyi yekusarudzwa kwesimba remvura yekudziya michina ndeyekuverengera kwekupisa uye nzvimbo yekutsinhana kupisa.
HLQ Induction Heating Equipment 2.5KW-100KW mweya wakatonhodzwa uye 120KW-600KW mvura yakatonhodzwa.
Kuenzanisa Kwesimba Kwesimba
Nzira yekudziya Conditions Power kunwa
Induction Kutya Kudziya marita gumi emvura kusvika pa10ºC 0.583kWh
Kupikisa kudziyisa Kudziya marita gumi emvura kusvika pa10ºC 0.833kWh
Kuenzanisa pakati peInduction Heating uye Marasha / Gasi / Resistance Heating
Items Induction Kutya Kupisa nemarasha Gasi-kupisa kupisa Kupikisa kudziyisa
Kupisa kushanda zvakanaka 98% 30-65% 80% Pazasi pe80%
Utsi hunosvibisa Hapana ruzha, hapana guruva, hapana gasi rekuburitsa, hapana tsvina inosara Mazimbe emarasha, utsi, carbon dioxide, sulfur dioxide Carbon dioxide, sulfur dioxide Non
Kusvibisa (pipe wall) Kwete-kusvibisa Fouling Fouling Fouling
Mvura inopfavisa Zvichienderana nemhando yemvura kunodiwa kunodiwa kunodiwa
Heating kugadzikana sachinja-chinja Simba rinodzikiswa ne8％ pagore Simba rinodzikiswa ne8％ pagore Simba rinodzikiswa neanopfuura 20％ pagore (yakakwira simba rekushandisa)
chengetedzo Magetsi nemvura kupatsanurwa, hapana kubuda kwemagetsi, hapana mwaranzi Ngozi ye carbon monoxide poisoning Ngozi yekabhoni monoxide chepfu uye kuratidzwa Ngozi yekudonha kwemagetsi, kuvhunduka kwemagetsi kana moto
mukurumari Iine musimboti dhizaini yekudziya, makore makumi matatu ehupenyu hwesevhisi 5 makore 5 kune makore 8 Hafu kusvika kune rimwe gore
Inodiwa parameters yezvikamu zvekupisa: chaiyo kupisa huwandu, uremu, kutanga tembiricha uye kupera kwekushisa, kupisa nguva;
Kuverengera fomula: chaiyo kupisa huwandu J/(kg*ºC)×tembiricha musiyanoºC×uremu KG ÷ nguva S = simba W
Semuenzaniso, kupisa mafuta ekupisa e1 ton kubva pa20ºC kusvika 200ºC mukati meawa, kuverenga kwesimba kunotevera:
Kunyanya kupisa simba: 2100J/(kg*ºC)
Tembiricha musiyano: 200ºC-20ºC = 180ºC
Kurema: 1ton = 1000kg
Nguva: 1 awa = 3600 masekondi
kureva 2100 J/ (kg*ºC)×(200ºC -20 ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW
Simba redzidziso ndiro 105kW, asi simba chairo rinowanzowedzerwa ne20% nekuda kwekutora kurasikirwa kwekupisa mukufunga, ndiko kuti, simba chairo 120kW. Maseti maviri e60kW induction heat system semusanganiswa anodiwa.
Zvakanakira kushandisa iyo Induction Fluid Pipeline Heater:
Kunyatso kudzora tembiricha yekushanda, mutengo wakaderera wekugadzirisa uye mukana wekupisa chero rudzi rwemvura kune chero tembiricha uye kudzvanywa ndezvimwe zvakanakira zvinounzwa neInductive Electrothermal. Induction Heating jenareta (kana Inductive Heater yezvinwiwa) inogadzirwa neHLQ.
Uchishandisa musimboti wemagnetic induction heat, muInductive Heater yekupisa kwemvura inogadzirwa mumadziro ekutenderera kwemachubhu esimbi isina tsvina. Mvura inotenderera nemachubhu aya inobvisa kupisa ikoko, uko kunoshandiswa mukuita.
Iyo Induction Pipeline Heater yezvinwiwa, kunyangwe nekushandisa simba remagetsi kugadzira kupisa, mune akawanda maapplication akazviratidza seyakanyanya kunaka sarudzo pane yekushanda masisitimu ekudziisa nemafuta emafuta kana gasi rechisikigo, zvakanyanya nekuda kwekusashanda zvakanaka kuri muhurongwa hwekupisa kupisa. uye kudiwa kwekugara uchichengetedza.
Muchidimbu, iyo Inductive Electrothermal Heater ine zvinotevera zvakanakira:
Sisitimu inoshanda yakaoma uye inotonhodzwa zvechisikigo.
Kunyatso kudzora tembiricha yekushanda.
Kunenge kuwanika kwekukurumidza kwekupisa paunenge uchipa simba Inductive Heater, nekuda kwekudzika kwayo kupisa inertia, kubvisa nguva yakareba yekupisa inodiwa kune mamwe maitiro ekudziya kusvika kune tembiricha yehurumende.
Kubudirira kwepamusoro nekuzotevera kuchengetedza simba.
High simba chinhu (0.96 kusvika 0.99).
Kushanda nekupisa kwakanyanya uye kumanikidzika.
Kubviswa kwezvinopisa zvinopisa.
Yese yekuchengetedzwa kwekushanda nekuda kwekuparadzaniswa kwemuviri pakati peheater uye network yemagetsi.
Mutengo wekugadzirisa haupo.
Mhinduro dzinokurumidza kushanduka kwekushisa (low thermal inertia).
Kusiyanisa tembiricha yemadziro - yakanyanya kuderera mvura, kudzivirira chero rudzi rwekutsemuka kana kushatisa kwemvura.
Kurongeka uye kufanana kwekushisa mukati memvura yese uye kunaka kwemaitiro ekuchengetedza tembiricha isingaperi.
Kubvisa mari dzese dzekugadzirisa, kuisirwa uye zvibvumirano zvehukama kana zvichienzaniswa nemabhoilers.
Yese chengetedzo yemushandisi uye maitiro ese.
Wana nzvimbo nekuda kweiyo compact kuvakwa kweInductive Heater.
Kupisa kwakananga kwemvura pasina kushandiswa kwekupisa.
Nekuda kwehurongwa hwekushanda, iyo hita inopesana nekusvibisa.
Kusununguka kubva mukugadzira zvisaririra mukudziya kwakananga kwemvura inopisa, nekuda kwekushomeka kweoxidation.
Mukushanda iyo inductive hita haina ruzha zvachose.
Kureruka uye mutengo wakaderera wekuisa.